ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့ ဂျပန်ရှေးရိုးရာထုပ်ပိုးမှုပုံစံ !!! - JAPO Japanese News
ဟူး 26 Feb 2020, 15:47 ညနေ
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလူကြိုက်များတဲ့ ဆူရှီ၊ ဆာရှိမိ ကိုသိထားကြပြီလို့ထင်ပါတယ်။
တစ်ယောက်စာအတွက်ဆိုရင် အနည်းငယ်လောက်သာကုန်မှာဖြစ်လို့ ကျန်တဲ့အပိုင်းကိုတော့ ထုတ်ပိုးပြီး ရေခဲသေတ္တာထဲပြန်သိမ်းထားတတ်ကြတယ်နော်။ ဒီနေရာမှာပြောပြချင်တာကတော့ ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ ရိုးရာအစဥ်အလာအရ ထုတ်ပိုးတဲ့နေရာမှာအသုံးပြုကြတဲ့ အပင်အကြောင်းကို သိသွားမယ်ဆိုရင် ပလက်စတစ်အိတ်အစား အဲ့ဒီအပင်ကိုပဲ အသုံးပြုချင်သွားပါလိမ့်မယ် !!
ဆူရှီနဲ့ ဆာရှိမိ ဆိုတာက ကမ္ဘာတစ်လွှားမသိတဲ့သူမရှိ လူမျိုးတိုင်းကြိုက်ကြတဲ့ ဂျပန်အစားအစာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ငါးကိုလတ်လတ်ဆက်ဆက်စားတဲ့ အလေ့အကျင့်က တစ်ဖြည်းဖြည်းပျံ့နှံ့လာခဲ့ပါတယ်။
အဲ့ဒီအထဲကမှ ပြဿနာလိုဖြစ်နေတာက ငါးရဲ့ အသားကလတ်ဆက်နေဖို့ ထိန်းသိမ်းရတဲ့နည်းလမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဆူရှီရော ဆာရှိမိရော ၁ မျိုးချည်းကိုပဲ အများကြီးစားရတာထက်၊ အမျိုးအစားများစွာရှိတဲ့အထဲကမှ နည်းနည်းစီစားရတာကို ပိုပြီးသဘောကျကြပါတယ်။
ငါးအသားကို နည်းနည်းလောက်ပဲယူပြီး ကျန်တဲ့အပိုင်းတွေကို သေသေချာချာပြန်သိမ်းထားဖို့ လိုအပ်တာပေါ့နော်။
ဆိုင်တော်တော်များများမှာတော့ ငါးကိုဒီလိုမျိုးထုပ်ပိုးပြီး ပြန်သိမ်းကြတာကို စာဖတ်သူတို့ မြင်ဖူးပါသလား?
ဒီမျက်မှောက်ခေတ်ထုပ်ပိုးမှုအတွက်သုံးတဲ့ပစ္စည်းတွေက သိပ္ပံနည်းအရ ဖန်တီးထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် အရင်ကတော့မရှိခဲ့ပါဘူး။
အဖြေကတော့ 経木（きょうぎ）Kyogi လို့ခေါ်ကြတဲ့အပင်ကို ပါးလွှာပြီးခြောက်သွေ့အောင် တစ်လွှာချင်းစီဖြတ်ထုတ်ပြီး ထုပ်ပိုးမှုတွေမှာအသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။
ဂျပန်မုန့်တစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ たこ焼き Takoyaki ကိုစားတဲ့အခါ သူ့ကိုထည့်ထားတဲ့ ခွက်လေးကိုရော မြင်ဖူးကြပါသလား?
အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ အဲ့ဒီလိုခွက်လေးတွေက ပုံစံတူလိုက်လုပ်ထားတာတွေပဲ ပိုများတယ်။
ဒါပေမဲ့ အရင်တုန်းကတော့ အဲ့ဒီလိုခွက်လေးတွေကို経木（きょうぎ）Kyogi ဆိုတဲ့အပင်ကနေ လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
သေချာတာပေါ့ ငါးရော၊ အသားရော နောက်ပြီး おにぎりOnigiri ဆိုတဲ့ rice ball လေးတွေကိုရော Kyogi အပင်နဲ့ ထုပ်ပိုးပါတယ်။
ပန်းကန်အနေနဲ့လည်း အသုံးပြုခဲ့ပြီး အဲ့ဒီကနေ ထုပ်ပိုးမှုသုံးပစ္စည်းဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ ထမင်းဘူအနေနဲ့တောင် အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ပလတ်စတစ်ဘူးတွေ အိတ်တွေပေါ်ပေါက်လာပြီး၊ အဲ့ဒါတွေရဲ့ အဆင်ပြေမှု၊ လွယ်ကူမှုတို့ကြောင့် အရင်経木（きょうぎ）Kyogi ဆိုတဲ့အပင်ကို မသုံးဖြစ်ကြတော့ပါဘူး။
ဒါပေမဲ့၊ အခုအချိန်မှာ အဲ့ဒီ Kyogi အပင်နဲ့ထုပ်ပိုးမှုက ပြန်ပြီးလူကြိုက်များလာတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် သူကအစိုဓါတ်ကိုလည်း အသင့်အတင့်စုပ်ယူပေးပြီးတော့၊ မှိုတွေကိုသတ်ပေးတဲ့အာနိသင်က သဘာဝအတိုင်း သူမှာပါပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအချက်တွေကြောင့်ပဲ ပြန်ပြီးလူကြိုက်များလာရပါတယ်။
ပုံမှန် စျေးထဲကဝယ်လာတဲ့ ငါးတွေကိုရေဆေးပြီးတော့ မီးဖိုချောင်သုံးစက္ကူနဲ့သုတ်ပြီး ပလတ်စတစ်နဲ့ထုပ်ပိုးကာ ကျွန်တော်တို့ သိမ်းထားတတ်ကြပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့မသိလိုက်တာက အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲ ဘက်တီးရီးယားတွေကပေါက်ပွားလာတာကိုပါ။
နောက်ပြီး မီးဖိုချောင်သုံးစက္ကူက ရေတွေကိုအကုန်စုပ်ယူလိုက်တဲ့အတွက် အသားတွေမှာ အရသာလည်းသိပ်မရှိတော့သလို သိပ်လည်းမလတ်ဆက်တော့ဘူးလို့ ခံစားရပါတယ်။
နောက်ပြီး ပလတ်စတစ်နဲ့ထုပ်ပိုးထားတာကို အဲ့ဒီအတိုင်း ရေခဲသေတ္တာထဲထည့်လိုက်ရင် ရေခဲသေတ္တာကထုတ်လွှတ်တဲ့ အအေးဓါတ်က တိုက်ရိုက်သက်ရောက်တဲ့အတွက် ဒါကလည်း လတ်ဆက်မှုတွေကိုလျော့ပါးသွားစေတဲ့ အရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဂျပန်နိုင်ငံမှာတော့ အပင်ကပေါ်များတဲ့အတွက်၊ သဘောကျတဲ့အပင်ရှိမယ်ဆိုရင် ဟင်းပွဲတွေမှာလည်း ထည့်စရာခွက်လေးမှအစ ဇွန်းတွေအထိ အသုံးပြုကျပါတယ်။ စာဖတ်သူတို့လည်း မြင်ဖူးမယ်လို့ထင်ပါတယ်။
ဆူရှီဆိုင်တွေမှာ ထမင်း၊ ရှာလကာရည်နှယ်ထားတဲ့ထမင်းတွေက တကယ်တော့ သစ်သားနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ဇလုံထဲမှာနှယ်ထားတာပါ။
သစ်သားဆိုတာက ရေကိုသင့်တော်သလိုစုပ်ယူထားပေးပါတယ်။ ဒါကြောင့် ရှာလကာရည်နှယ်ထားတဲ့ထမင်းမှာ ရေတွေနဲ့ပွပွကြီးဖြစ်မနေသလို အစိုဓါတ်အခြောက်လွန်ပြီးမာမသွားအောင်လည်း ထိန်းသိမ်းပေးပါတယ်။
အဲ့ဒါကတော့ မစုပ်ယူနိုင်တော့တဲ့ ရေအနည်းငယ်က ယိုစိမ့်တာတို့၊ ငါးတွေအသားတွေရဲ့ အနံ့က ရေခဲသေတ္တာထဲမှာ စွဲကျန်ခဲ့တာတို့တော့ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒါကလည်းပဲ အသုံးပြုတဲ့အပေါ်မှာပဲ မူတည်တာပါ။
ဒါဆို ကျန်းမာရေးနဲ့လည်း ညီညွတ်ချင်တယ်၊ သန့်လည်းသန့်ရှင်းချင်တယ်ဆိုရင်တော့ 経木（きょうぎ）Kyogi အပင်နဲ့ထုပ်ပိုးထားတာကို ပေါ်ကနေ ပလတ်စတစ်နဲ့နောက်တစ်ကြိမ်ထုပ်ပိုးဖို့ပဲပေါ့။
အပေါ်မှာပြောခဲ့သလို ပလတ်စတစ်နဲ့ပဲထုပ်ပိုးတာက ကျန်းမာရေးအတွက်မကောင်းသလို၊ 経木（きょうぎ）Kyogi အပင်နဲ့ပဲထုပ်ပိုးထားတာကလည်း အနံ့တွေမလုံတာရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် ၂ ခုစလုံးကိုပေါင်းစပ်အသုံးချလိုက်တာက အကောင်းဆုံးပါပဲ။
ဆူရှီဆိုင်တွေမှာ ပလတ်စတစ်နဲ့ထုပ်ပိုးထားတဲ့အသားနဲ့ Kyogi အပင်နဲ့ ထုပ်ပိုးထားတဲ့အသားကို ယှဥ်ပြီးစားကြည့်လိုက်ရင် အရသာမတူတာကို သိသိသာသာကြီးခံစားရမှာပါ။ ဆန္ဒရှိရင် သေချာပေါက် စမ်းသပ်ကြည့်ပါ။
経木 အပင်ကနေ လုပ်ဆောင်ပုံတွေကို video clip နဲ့ပါတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
အမျိုးသားအမွေအနှစ် ဖြစ်တဲ့ အရှုရ (阿修羅（あしゅら）) ရုပ်ပွားတော် က ဘာနဲ့ပြုလုပ်ထားတာလဲ?